Inona izany, ahoana ny fomba namoronana azy ary inona no ampiasain'ny angovo solar photovoltaic? Fanavaozana maintso
Mampalahelo fa ny angovo be mpampiasa ankehitriny dia Tsy azo havaozinaIreo izay avy amin'ny loharanon-karena amin'ny planeta izay hiafara amin'ny famaranana. Ny loharanon-karena fosil toy ny arina, gazy voajanahary na solika no loharanon'ny angovo lehibe ampiasain'ny olombelona.
Na izany aza, misy karazana angovo hafa toa ny rivotra, biomassa, geothermal ankoatry ny hafa, soa ihany fa mahazo tany bebe kokoa izy ireo. Manaraka izany dia hiresaka momba ny Angovo Solar Photovoltaic: inona io, ahoana ny fomba namoronana azy ary ny fampiharana ananany.
1 INONA NO ENERGY PHOTOVOLTAIC?
2 AHOANA NO HANAOVANA NY ENERGY PHOTOVOLTAIC SOLAR?
3 Fampiasana ENERGY PHOTOVOLTAIC SOLAR
INONA NO ENERGY PHOTOVOLTAIC?
La ny angovo azo avy amin'ny masoandro Izy io dia iray izay manararaotra ny taratra tarehin'ny hazavan'ny masoandro hamokarana angovo. A loharano angovo madio tanteraka, izay tsy mitaky fampiasana réaction simika na miteraka karazana fako. Ankoatr'izay dia angovo azo havaozina izy io. Ny herin'ny masoandro dia ho eo mandrakizay, na farafaharatsiny, mandritra ny fotoana maro an'arivony tapitrisa. Raha fintinina dia a angovo madio, maharitra ary azo havaozina. Ary ny fanontaniana lehibe dia ny: Fa maninona no tsy apetraka bebe kokoa? Ny zavatr'olombelona (Lobbies).
Araka ny voalazantsika, ny Angovo Solar Photovoltaic Io ilay manova ny herin'ny masoandro ho lasa angovo herinaratra. Fa ahoana no anaovana an'io fanovana io? Ahoana no famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro fotovoltaika?
AHOANA NO HANAOVANA NY ENERGY PHOTOVOLTAIC SOLAR?
La Angovo Solar Photovoltaic dia mifototra amin'ny fitsipika fa fahefana voarakitra ao amin'ny sombin-jiro (ny sary) azo avadika ho herinaratra. Tanteraka izany amin'ny alàlan'ny antsoina fizotry ny fiovan'ny photovoltaic, izay hiatrehantsika ny manaraka.
Amin'ny ankapobeny, ny zavatra mitranga dia, amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana namboarina manokana ho an'ity tanjona ity, dia azo herinaratra misaotra an'i effets photoelectric ny tara-masoandro. Amin'ny ankapobeny ireo fitaovana ireo dia misy foil metaly semiconductor izay mahazo ny anarana hoe sela na lovia photovoltaic.
Vokatr'izany fizotry ny fiovan'ny photovoltaic, dia azo fahefana amin'ny voltages ambany (eo anelanelan'ny 380 sy 800 V) ary amin'izao fotoana izao. Manaraka a mpampiasa vola manova azy ho fifandimbiasana ankehitriny.
Ireo fitaovana misy ireo sela fotovoltaika ireo dia antsoina panneaux solaires Ary, ho an'ny fampiasan'ny tena manokana na ho an'ny fianakaviana, matetika dia manana vidiny manodidina ny 7.000 euro izy ireo (na dia nidina aza ny vidiny ary midina be). Ankoatr'izay, ireo fametrahana ireo dia manana tombony izay mitaky saika tsy fikojakojana. Mazava ho azy, raha te hampitombo ny zava-bitany ianao dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana mety (toerana misy masoandro maro) sy ny fametrahana azy sy ny orientany.
Ny haavon'ny fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic kely lavitra noho izay atolotry ny loharano toy ny solika na gazy voajanahary, ary izy io dia mihoatra na latsaka amin'ny haavo mitovy amin'ny herin'ny rivotra (miankina amin'ny faritra jeografika, mazava ho azy). Na izany aza, mihamitombo ny fampiasana azy ary ankehitriny dia efa ampiasaina amin'ny faritra tena samy hafa izy, araka ny hitantsika amin'ny fizarana manaraka.
Fampiasana ENERGY PHOTOVOLTAIC SOLAR
Ny fampiasana lehibe ny angovo solar photovoltaic dia misy ifandraisany amin'ny fahafahany manova io angovo avy amin'ny masoandro io ho lasa angovo elektrika. Amin'io lafiny io dia misy endrika fampiasana isan-karazany. Amin'ny lafiny iray, azo ampiasaina izy io hamoronana angovo be dia be amidy orinasa mpamatsy herinaratra. Etsy ankilany, azo ampiasaina irery na miaraka amin'ny fianakaviana, izany hoe manome angovo ao an-trano. Betsaka ny olona mametaka panneaux solaires amin'ny tampon-trano mba hampiasa ny angovo avy amin'ny masoandro ho angovo hafa.
Ny iray amin'ireo fampiasana lehibe azon'ny angovo solar photovoltaic dia ny manome angovo amin'ireo tranokala sarotra azo na any amin'ny toerana ahitany fahasahiranana amin'ny herinaratra, izany hoe ireo toerana ambany tahan'ny fampandrosoana izay tsy ahafahany mahazo tariby mandeha amin'ny herinaratra.
Toy izany koa, ny angovo avy amin'ny masoandro dia iray amin'ireo fomba lehibe mamatsy ny zanabolana izany dia eo amin'ny orbit eny amin'ny habakabaka. Azo antoka fa samy nahita ny sarin'ireo zanabolana ireo isika rehetra, izay misy panneaux solaires amin'ny endriny hanararaotana ny angovo omen'ny masoandro eny amin'ny habakabaka.
Ny angovo herinaratra dia azo ampiasaina amin'ny fananganana rafitra famokarana hybrid angovo, izany hoe ireo izay mampifangaro angovo avy amin'ny masoandro amin'ny rivotra, na angovo avy amin'ny masoandro miaraka amin'ny loharanon-karena fosily.
Ary farany, na dia maro aza ny olona tsy mahalala an'izany, miasa ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic hamokarana angovo izay ampiasaina amin'ny faritra tena samihafa: Telefaona finday. mpamerimberina radio sy fahita fahitalavitra, tsato-kazo SOS lalana, fanaraha-maso lavitra, fanaraha-maso lavitra ho an'ireo tambazotra fanondrahana, telemetry, radara, radiotelephony amin'ny ankapobeny ary ho an'ny paositra fanaraha-maso ara-tafika na ala, telephony satelita ambanivohitra, telewaves, trano hefa finday hampiasain'ny besinimaro, fanovana, rohy radio
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Inona ny, ny fomba namokarana azy ary ny fampiasana inona no ananan'ny angovo masoandro photovoltaic
Noraran'i Barcelona ny fivezivezin'ny fiara mihoatra ny 20 taona